COVID-19 : MKPỌCHI OBODO ERUGHI N’IME OBODO
Owere – Mkpọchi Obodo maka ọrịa nfesa koro (COVID-19) dị irè n’Owere bụ isi obodo Imo Steeti nke na o nweghị onye ọbụla na-agagharị site na ntimiwu Gọvanọ Steeti ahụ bụ Sinetọ Hope Ụzọdịmma iji gbochie ọrịa ahụ ifesa ebe nile. Otu ihe ahụ ka ọ bụkwa n’Ebọnyị Steeti ebeRead More →
MBULI ỤGWỌ ỌKỤ GA-ADỊ IRE SITE N’ABALỊ IRI ATỌ N’ỌNWA JUUN-NERC
Abụja – Ụlọ ọrụ National Electricity Regulatory Commission (NERC) nọrọ taa kwuo na mbuli ụgwọ ọkụ ga-adị ire site n’abalị iri atọ nke ọnwa Juun afọ a. N’ozi nke Jems A. Momoh na Dafe C. Akpeneye, Onyeisi oche nakwa Kọmishọna na-ahụ maka iwu nakwa mgbaso usoro n’ụlọ ọrụ ahụ tinyereRead More →
-Igbo ga-enwelata otu nchekwa nke onwe ha Enugwu – Mazị Ọbọzuluike Ọfọelue, Onyeisi oche otu Civil Liberties Organization (CLO), ngalaba Enugwu Steeti ekwuola na o zighi ezi bụ etu ndị Gọvanọ Mpaghara Ọwụwa Anyanwụ ala anyị ka si na-egbu oge n’okwu banyere ihiwe otu nchekwa maka mpaghara ahụ. N’okwu ọRead More →
Ụmụahịa – Ụlọikpe Majie nọ n’Ụmụahịa enyela iwu ka a kpọchie otu onye Ọka iwu bi n’Aba, Mazị Emperọ Gebrel Ogbonna n’ụlọ nga Afaraukwu, Ụmụahịa. Nkea bụ maka ebubo Aka na-achị Abịa Steeti, Dọkịnta Okezie Ikpeazụ na-ebo nwamadị ahụ, onye bụ ọka iwu na-ahụ maka ikike dịịrị mmadụ na ọRead More →
Abụja – Sinetọ Godiya Akwashiki, Ọnụ na-ekwuru Ụlọ Nzukọ Sineti Naịjiriya nọrọ taa bụ Mọnde were kwuo na ndị Sinetọ nile ekpebiela iji ọkara ụgwọ ọnwa ha were nye onyinye ikwado agha a na-ebu megide ọrịa koro n’ala anyị. N’ozi o zipụrụ ndị nta akụkọ, Sinetọ Godiya kwuru sị: “Ụlọ NzukọRead More →
NDOZI OBODO: “ỌNYỊBA” DỌKỊNTA LAZ UDE EZE APỤTALA N’ỌGBỌ
Igbo bụ Igbo, oke mmọnwụ adabatala n’ọgbọ na hoo!haa!! Ichie Dọkịnta Laz Ude Eze awuchiela n’ọba ozi hoo!haa!! Bido taa, Ichie Laz Ude Eze gana ede edemede na NDOZI OBODO, nkewata edemede (column) na-ahụ maka ọrụ ndozi obodo (Community development) n’akwụkwọ akụkọ anyị www.hoohaa.com.ng Ichie Eze bụ dọkịnta na – ahụRead More →
– Dokinta Laz Ude Eze Igbo ndi ọma ekele m unu. Obi dị m uto nke ukwuu ibido edemede na ogbo nta akụkọ ‘hoohaa.com’. M ga-agba mbọ ka m na-ede edemede a kwa izu uka ọ bụla. Olile anya m bụ na ụmụ afọ Igbo ga-agụ ma tinye kwa ọnụRead More →
Ndị Uwe Ojii na mpaghara Kwale na mba Kenya na – eme nnyocha maka ogbugbu e gburu otu nwoke zere uzere dịka onye bu ọrịa koro. Nwoke a e gburu, Jọọjị Kotini Hezron, 35, bụ onye ụmụ ntorobịa zutere n’ụzọ ụbọchị Tuuzdee ka ọ na-ala be ya. Uzere o zereRead More →
Lọndọn – Mazị Boris Jọnsịn, Onyeisiala Briteenụ ebutewo ọrịa koro. Jọnsịn, onye gosipụtara ejirimara ọrịa ahụ ga-anọzị ọnọdụ nkewapụ onwe na “10 Downing Street” bụ obi Onyeisiala mba Briteenụ ganye na o nweta onwe ya. Jọnsịn zipụrụ ozi banyere nkea na Twitter sị: “N’ime otu ụbọchị gara aga, e gosipụtaraRead More →
Ọka – E nwere nnukwu ihe mberede okporo ụzọ n’ụtụtụ a n’Ọka, Anambara Steeti nke tara isi mmadụ atọ. Ihe mberede a mere mgbe ụgbọala bu mmanụ (petrol tanker), ụgbọala obu ibu( trailer) obere ụgbọala ndị njem (mini bus) nakwa keke kụrụ onwe ha n’akụkụ Kwata. Kaọdịugbua, ndị ọrụ nchekwaRead More →
Abụja – N’ime mkpa mkpa ọrịa nfesa Koro na-akpa na mba ụwa, ndị Ụlọ Nzukọ Omebeiwu Nta ala anyị ebutewo ụgbọala Toyota narị anọ ha na-eke onwe ha dịka ụgbọala ọrụ ha. Ozi hoo!haa!! nwetara bụ na ụgbọala ndị a bụ Toyota Camry 2020 udiri nke V6 “Limited Edition” dọsa n’ọdụRead More →
Otu jikọtara ndị akwụla na mba Sawụt Afrịka bụ Sisonke etiela mkpu ka Onyeisiala mba ahụ, Sịrịl Ramaphosa gbatara ha ọsọ enyemaka na agụụ na anyụzị ha anya kemgbe a malitere mkpọchi obodo maka ọrịa koro. Ramaphosa nọrọ ụbọchị Mọnde kwupụta mkpọchi obodo zuru mba ahụ ọnụ iji zọpụta ndịRead More →
Enugwu – Ụlọ ọrụ Enugwu Capital Territory Development Authority (ECDA) akwatuola ụlọ elu dị nkwagó abụọ (2 storey) nke a rụchiri ụzọ na New Haven, Enugwu. Ụlọ elu ahụ dị n’Okporo Ụzọ (Street) Mbanefo n’akụkụ nkwụsị ụgbọala(Bus stop) Block bụ nke karịworo iri afọ anọ e jiri rụọ ya. EtuRead More →
ỌRỊA KORO AGBAGHỊ AKA, ANYỊ KPỤỌ ARỤ, Ọ GA-ALA – OGBONI
Legọs – Onyeisi otu nzuzo Ogboni confraternity, Oba Abdul Olakisan Adetoyese akọwaala ọrịa koro dịka ihe n’agbaghi aka, ma kwupụtakwa njikere ya ịchụla ọrịa ahụ site na ịkpụ arụ, iji mee ka obi dị ndị mmụọ mma. Oba Abdul kwuru nkea ụbọchị Fraịdee site n’ozi o zigaara ndị nta akụkọ.Read More →
TỤFỊAKWA! NWOKE AGBAGBUOLA NWA YA ONYE BERE ISI NNE YA MAKA ỌGWỤ EGO
Nsụka – Otu nwoke bụ Mazị Siril Ugwu agbagbuola nwa ya nwoke bụ Kenet, onye gburu nne ya ma bere isi ya iji mee ọgwụ ego n’Iheaka dị n’okpuru ọchịchị Ndịda Igboeze nke Enugwu Steeti. Ozi hoo!haa!! nwetara bụ na Kenet, onye nọ na Legọs azụ ahịa akarangwa ụgbọala lọtaraRead More →
Enugwu – Hon. Ifeanyi Mbude, Nnukwu Onyeisi Ọgbakọ obodo Agbada – Nenwe dị n’Okpuru Ọchịchị Anịnri nke Enugwu Steeti ekwuola na obodo ya ga- enwe “agamnihu pụrụ iche n’oge ọchịchị ya”. Mbude kwuru nke a ụbọchị Fraịdee oge e duru ya na ndị otu ya n’iyi ọrụ dịka ndị isiRead More →
BỊAFRA GA-ADỊ, MA EMEGHỊ NHAZIGHARỊ ỌCHỊCHỊ NAỊJIRIYA – AFENIFERE
Legọs – Afenifere agbaala ama na Naịjiriya ga ekewa n’oge n’adịghị anya, etu ihe siri kwuru n’obodo a taa. Mazị Yinka Odumakin, Ode Akwụkwọ Mgbasa Ozi Afenifere kwuru nke oge ọ na-etinye ọnụ n’okwu Mazị Nnamdi Kehinde Kanu, Onyeisi otu IPOB kwuru “na a ga-enweta Biafra n’ihu ya” Kanu nọrọRead More →